HomeEnglandJose Mourinho: ‘Cabsi Igama Hayso In lay Eryo’
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa ku kaftamay in mulkiilaha naadiga ee Roman Abramovich uu shaqada ka eryi doono isaga maadaama ay kaalinta saddexaad ee kala saraynta horyaalka the Premier League ku dhamaysteen sanadkan.
Naadiga The Blues, oo ku guuldaraystay inay koobab qaadaan, sanadkii u horeysay ee uu laylyo 51 jirkan shaqada garoonka Stamford Bridge ku soo noqday, horyaalkuna soo af-jarmay iyagoo 4 dhibcood ka hooseeya kooxda Horyaalka qaaday ee Manchester City.
Si kastabase ha ahaatee, oday Mourinho ayaa ku adkaystay inaanay jirin wax cabsi ah oo ka haysa inuu waayo shaqadiisa xagaagan.
“Waxa laga yaabaa Abramovich inuu i eryo aniga berri, Ma ogi,” ayuu Mourinho ku sheegay waraysi uu siiyey idaacada Get West London, isagoo hadalka sii watana wuxuu intaas ku daray, : “Laakiin taasi kuma jirto wixii la ii ballan qaaday, kamanay mid ahayn wixii aanu ku wada hadalnay markaanu wada fadhiisanay ee ka doodaynay mansabka Chelsea taagnayd iyo halkay u socoto.
“Chelsea waayo cusub ayay soo dhex jibaaxday intii lagu jiray xili ciyaareedka 2003/4 oo uu gadhwadeen ka ahaa Abramovich, kolba jiho ayaanay qabsanaysay. Taas oo markii dambe dhashay faa’iido degdeg ah.
“Waagii cusbaa wuu dhamaaday imika, mid hor leh ayaanan gudo gallaynaa, xili ciyaareedkanina waa xili ciyaareedkii koowaad ee xiliga cusub. Shaqada si fiican ayaan u qaban doonaa.”